लेकवेशी नगरपालिकाको ७ औं नगरसभा सुरु | लेकबेशी नगरपालिका
भ्याकुलोडर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने सम्बन्धि सूचना
दरखास्त स्वीकृत सम्बन्धमा
लेकवेशी नगरपालिकाका सम्पूर्ण शाखाहरु, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सम्बन्धित सबै कार्यालय ।
दरखास्त फारम भर्न म्याद थपको सूचना
Home » लेकवेशी नगरपालिकाको ७ औं नगरसभा सुरु
Submitted on: Wed, 06/24/2020 - 16:58
लेकवेशी नगरपालिकाको ७ औं नगरसभा मिति २०७७ आषाढ १० गते देखी सुरु भएको छ । नगर प्रमुख श्री गगन सिं सुनारको सभाध्यक्षतामा संचालन भएको कार्यक्रममा नगर उप- प्रमुख श्री शान्ती कुमारी छन्तेलले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागी नीति तथा कार्यक्रमहरु पेश गर्नुभएको थियो । अबको आर्थिक वर्षमा परिमाण मुखी भन्दा पनि परिणाम मुखी योजना र कार्यक्रमहरुमा जोड दिईने जानकारीदिनुभयो । उक्त कार्यक्रममा नगर प्रमुख तथा उप-प्रमुखले COVID-19 बाट ज्यान गुमाएका हरुलाई समवेदना साथै संक्रमित हरुको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गर्नुभएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कार्यान्वयन हुने उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमका लागि कूल जम्मा रु. ६० करोड ४० लाख ७६ हजार २ सय २२ रुपैंया विनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ३९करोड ११ लाख ४४हजार ३ सय ९२ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ २० करोड ५६ लाख २९ हजार १५ रुपैंया विनियोजन गरिएको छ । त्यसै गरी विकास साझेदार संघसस्थाहरुको कार्यक्रम वापत रु ७३ लाख २ हजार ८सय १५ रुपैया रहेको छ ।
आगामी आ.व. २०७७/ ०७८ मा अनुमान गरिएको खर्चमध्ये आन्तरिक श्रोतवाट रु. १ करोड २४ लाख २ हजार ७ सय ७७ रुपैयाँ , संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु. ११ करोड ३६ लाख, संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान २५ करोड ७८लाख, संघीय सरकारबाट प्राप्त राजश्व वाँडफाँड रु. ८ करोड ७७ लाख २ हजार ६सय ३० रुपैयाँ , संघीय सरकारबाट विशेष शसर्त अनुदान २ कारोड ४० लाख ,संघीय सरकार समपुरबाट रु. १ करोड २८ लाख ,प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. ९९ लाख ६० हजार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजश्व वाँडफाँड रु. ७ लाख ७२ हजार र संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान (सामाजिक सुरक्षा)रु. ७ करोड ७७ लाख ३६ हजार , परिचालन गरिने छ ।साथै विकास साझेदार गैरसरकारी संघसंस्थाहरुबाट रु.७३ लाख २ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ परिचालन गरिने छ ।